LIISKA DHIRTA DHIRTA KALA DUWAN - ROSYANKA
Ugu Weyn Ee Rosyanka
Dhirta dhoobada iyo sharaxaadda
In dunida of dhirta qariib badan, laakiin strangest, malaha, waa dhirta predion. Badankood waxay ku quudiyaan arthropods iyo cayayaanka, laakiin waxaa jira kuwa aan diideynin gabal hilib ah. Waxay u eg yihiin xayawaanka, waxay leeyihiin casiir khaas ah oo caawiya burburinta loona dhejiyo dhibbanaha, iyada oo heleysa nafaqooyinka lagama maarmaanka ah.
Qaar ka mid ah dhirta cayayaanka ah ayaa lagu kori karaa guriga. Waxa sax ah iyo waxa ay matalaan, waxaan sii sheegi doonnaa dheeraad ah.
Goobta dabiiciga ah ee geedkaan waa xeebta bari ee waqooyiga Ameerika, laakiin maanta waxaa laga helaa Texas iyo koonfur-bari Kanada. Dhibbanayaashiisa sarratseniya waxay caleemaha ku qabtaa caleemaha, iyagoo leh muuqaal jug ah oo leh jilitaan qoto dheer iyo dabool yar oo ka soo baxaya godka. Nidaamkani wuxuu ka ilaaliyaa jilitaanka ka soo galka biyaha roobka, kaas oo xoqin kara cabitaanka dheefshiidka gudaha. Waxay ka kooban tahay enzymes kala duwan, oo ay ku jiraan protease. Wareegga qarkood ee barafka cas ee casaanka ah, casiir kaas oo xusuusta nectar waa la sii daayaa. Dhirta tufaaxa iyo soo jiidata cayayaanka. Ku fadhiisashada geesahooda sariirta ah, looma hayo, lagu dhejiyo gawska oo dhoobo.
Waa muhiim! Maanta, waxaa jira in ka badan 500 nooc oo dhirta la mid ah qaybaha kala duwan ee adduunka. Intooda badan waxay ku koraan Koonfurta Ameerika, Australia, Afrika. Laakiin dhammaantood, iyadoon loo eegin noocyada, isticmaal mid ka mid ah shanta siyood ee qaadashada dabka: ubaxa qaabka jug ah, caleemaha isku xira sida dabin, nuugista dabinka, dabinka dhuuban, dabagal ba'an ee dabin ah.
Warshad kuleyl ah oo quudisa cayayaanka. Waxay u koraan sida liana, koraya ilaa 15 mitir dhererka. Leaves waxaa lagu sameeyaa Liana, marka dhinacyada midkoodna uu korayo. Dhamaadka anteenaha ubaxa qaabka jug ah oo la socdo waqti ayaa la sameeyaa, taas oo loo isticmaalo sida dabin. By habka, in koobkan dabiiciga ah dabiiciga ah waxaa la soo ururiyey, taas oo doog ah cabin in ay dabiiciga ah dabiiciga ah. Tani, waxay heshay magac kale - "Daanyeer". Dareeraha gudaha koobka dabiiciga ah waa wax yar oo dhegdheg leh, waa uun dareeraha. Cayayaanka waxaa ku jira daadi, ka dibna dhoobo geedka. Hannaankani wuxuu ka dhacaa qaybta hoose ee saxanka, oo qanjidhada qaaska ah ay ku yaalaan si ay u nuugaan una soo daayaan nafaqooyinka.
Ma taqaanaa? Khabiirka dabiiciga ah ee Karl Linnaeus, oo qarnigii 18aad abuuray nidaam lagu sifeynayo dabeecadda nololeed, oo aan weli isticmaalno maanta, ayaa diiday inuu rumaysto in tani suurtagal tahay. Ka dib markii dhan, haddii Venus flytrap dhab ahaan ciribta cayayaanka, wuxuu ku xadgudbay nidaamka dabeecadda, oo uu Ilaah ka dhigay. Linnae waxay rumaysantahay in dhirta ay cayayaanka ku dhaceen fursad, iyo haddii cilladda yaryar ee nasiib-darrada ah ay joojinayso xayiraadda, waa la sii deyn doonaa. Geedaha nuujinaya xayawaanka waxay naga dhigayaan digniin aan la sheegi karin. Dhab ahaantii, xaqiiqadu waxay tahay in amar noocaas ah oo ka soo horjeeda fikradaha ku saabsan caalamka.
Warshad cayayaanka ah waxaa ku jira 130 nooc oo ku baxa Seychelles, Madagascar, Philippines, iyo sidoo kale Sumatra, Borneo, India, Australia, Indonesia, Malaysia, China. Asal ahaan, dhirta waxay sameeyaan dhalooyinka yaryar, dabinka iyo quudinta oo kaliya cayayaanka. Laakiin noocyada sida Nepentes Rajah iyo Nepentes Rafflesiana maaha kuwa nuucyada yar yar. Ubax-carnivore this si weyn u guuleysatay digada jiirka, hamsters iyo jiirka yar.
Geedka dhoobada ah (genlisea)
Tartankaan, marka hore, cawska wuxuu ku badanaa Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika, iyo sidoo kale Afrika, Brazil iyo Madagascar. Caleemaha noocyada dhirta badan, kuwaas oo tiradoodu ka badan tahay 20, waxay ka soo baxaan jeel weyn oo soo jiidasho iyo haysan dhibbanaha. Laakiin dabka ayaa laftiisa ku jira ciidda, halkaasoo dhirta ay cayayaanka ku dhufato ari soo jiidasho leh. Dhuunta waa tuubo god leh oo ka soo baxa dareeraha qallalan. Laga soo bilaabo gudaha waxaa lagu daboolay jilbada laga soo xigtay ka soo bixitaanka, taas oo aan u oggolaan in dhibbanuhu ka baxo. Tuubooyinka sidoo kale waxay u dhaqmaan sida xididdada geedka. Tan kor ku xusan, dhirta ayaa caleenta sawirthetic ah, iyo sidoo kale ubax ku saabsan asliga ah ee ku saabsan 20 cm. Ubaxa, iyada oo ku xiran noocyada, waxaa laga yaabaa in midab kale, laakiin inta badan ku wareegsan huruud ah. Inkasta oo genisea ay ka mid tahay dhirta cayayaanka leh, waxay inta badan ku filaysaa jeermiska.
Darlington California (Darlingtonia Californica)
Kaliya hal warshad ayaa la xiriirta caynka Darlingtonia - Darlingtonia Californian. Waxaad ka heli kartaa ilaha iyo dhuumaha California iyo Oregon. Inkasta oo la rumeeysan yahay in dhirta dhif this jecelyahay biyo socda. Dabin waa caleemaha midabka cas-casaan dhirta. Waxay leeyihiin muuqaal ah daboolka "cobra", iyo boodh cagaaran oo kor ku yaal, oo leh laba xabbo oo ka soo baxaya dhamaadka. Wajiga, halkaasoo cayayaanka ay ku dhaartaan caraf gaar ah, waa 60 cm dhexroorka. Villi wuxuu ku koraa gudaha gudaha xubnaha dheef-shiidka. Sidaa awgeed, cayayaanka gudaha ku jira waxay leedahay hal qudha - qoto dheer geedka. Ku noqo dusha sare ee aanad awoodin.
Caleenta dhirta, kuwaas oo ay ku jiraan 220 noocyada, waxay magaceeda u heshay tiro badan oo ah xumbo laga bilaabo 0.2 mm ilaa 1.2 cm, kuwaas oo loo isticmaalo sida dabin. In goobooyinka, cadaadiska dufan iyo xirmo yar oo gudaha u fura oo si fudud u ciribtiro cayayaanka dhexda biyaha, laakiin ma sii daayo. Cuntada dhirta waxay u adeegtaa labadaba tadpoles iyo boodaha biyaha, iyo noolaha ugu fudud ee aan nooleyn. Caleemaha geedka ma aha, sababtoo ah waxay ku nooshahay biyaha. Xagga sare ee biyaha ayaa soo saara ubax leh ubax yar. Waxaa loo tixgeliyaa geedka ugu dhakhsaha badan ee adduunka. Wuxuu ku koraa carrada qoyan ama biyo meel kasta, marka laga reebo Antarctica.
Warshadu waxay leedahay caleemo cagaaran ama caleemo qafiif ah, daboolay dareere dhega badan, taas oo cillado iyo digest cayayaanka. Deegaanka ugu muhiimsan - Aasiya, Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika.
Waa muhiim! Maanta, caan ka mid ah dhirta yaryar ee khatarta ah ayaa kordhay sidaas aad u badan in botanistu ay sir ka dhigaan goobaha dhirta noocan oo kale ah. Haddii kale, waxay si dhaqso ah u burburiyaan ugaaratada kuwaas oo ku hawlan ugaadhsiga sharci-darrada ah iyo ganacsiga dhirta cayayaanka.
Dusha sare ee caleemaha Zhiryanka ayaa leh laba nooc oo unugyo ah. Qaarkood waxay sameeyaan dheecaan xaji ah oo dheecaan leh oo muuqda dusha sare ee qaabka dhibcaha. Hawsha unugyada kale waa soo saarista unugyada gaarka ah ee dheefshiidka: esterase, protease, amylase. 73 ka mid ah noocyada dhirta, waxaa jira kuwa sannadka firfircoon. Oo waxaa jira kuwa iyagu seexanaya "xilliga jiilaalka", iyaga oo samaynaya meel aan ciriiri lahayn. Marka heerkulku kor u kaco, dhirta ayaa sii deynaya caleemaha jilicsan.
Mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan qurxinta gudaha. Intaa waxaa dheer, waa mid ka mid ah caleemaha ugu weyn ee dhirta carnivorous. Waxaa ka mid ah ugu yaraan 194 nooc oo laga heli karo meel kasta oo adduunka ah, marka laga reebo Antarctica. Noocyada intooda badani waxay sameeyaan rosettes basal, laakiin noocyada qaar ayaa soo saara rosettes toosan ilaa mitirka dhererka. Dhammaantood waxaa lagu daboolay tiyaatooyin qallalan, oo ah dhinacyada oo ay ku jiraan dhibco dheecaan adag. Cayayaanka soo jiidanaya iyaga ayaa ku dul fadhiisanaya, maqaarka, iyo godadka ayaa billaabanaya inay soo furtaan, xirxiraan dhibbanayaasha dabin. Qanjirooyinka ku yaala dusha sare ee caleenta qoyaanka dheefshiidka iyo nuugista nafaqooyinka.
Biblis, inkastoo ay carnivorousness, waxaa sidoo kale loo yaqaan warshad samaynta qaansor. Asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga iyo galbeedka Australia, waxaa kale oo laga helaa New Guinea qoyan, qoyan. Waxay ku koraan geedo yar, laakiin mararka qaarkood waxay gaari karaan 70 cm oo dherer ah. Wuxuu bixiyaa ubaxyo qurux badan oo ah midabyo buluug ah, laakiin sidoo kale waxaa jira tufaax cad oo cadcad. Gudaha inflorescence waxaa ku jira shan faroodlood. Hase yeeshee dabinka cayayaanka ayaa caleemo saaran oo leh wareega wareega, oo leh timo qanjir ah. Sida foornada, marka ugu danbeysa waxay leeyihiin walxo jilicsan, oo walxo adag leh si loogu dhibo dhibbaneyaasha. Sidoo kale, waxaa jira laba nooc oo qanjiro ah oo ku yaal waraaqaha: kuwaas oo qarsoodi ah oo qashinka ah iyo kuwa cayayaanka cunaya. Laakiin, marka laga reebo fuuqbax, biblis ma qarsoodi karto enzymes habkan. Botanistu waxay weli ku hawlan yihiin muran iyo cilmi baaris ku saabsan dheefshiidka dhirta.
Tilmaamaha Aldrandanda (Aldrovanda vesiculosa)
Marka beeralayda ubaxa hiwaayadda u xiiso leh magaca ubax ah oo cuna cayayaanka, waxay dhif u bartaan ku saabsan bubbly aldorande. Xaqiiqdu waxay tahay in dhirta ay ku nool yihiin biyo, aan lahayn xididada, sidaas darteedna wax yar ayaa loo isticmaalaa taranka lo'da. Waxay u adeegtaa badiyaa qashinka iyo dirxiga yar yar ee biyaha. Sida dabaysha, waxay isticmaashaa caleemo dhoobo illaa 3 mm oo dherer ah, kaas oo ku kobcaya 5-9 xabbo wareega wareegga dhererka dhererkiisa. On caleemaha koraan petioles-qaabeeya petioles, buuxiyey hawada, taas oo u ogolaanaya warshad si ay u sii jiri dusha sare. Dhamaantoodna waxay ku yaalaan cilia iyo saxan yar oo ah qaabab qolof ah, oo ku daboolan timaha xasaasiga ah. Marka ugu dhakhsaha badan ay dhibsadaan dhibbanaha, caleemaha ayaa xiran, raacaya oo dheefin.
The afkoda naftooda gaari dherer ah 11 cm. Aldrewda ayaa si dhakhso ah u koraya, iyada oo la isku daro ilaa 9mm maalintii oo dherer ah, samaynta lame cusub maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay ku koraan hal dhinac, dhirta ayaa u dhinto dhinaca kale. Warshadu waxay soo saartaa ubaxyo yar yar oo cad.
Tani waa geedka ugu caansan caleemaha, kaas oo si ballaadhan loogu beeray guriga. Waxay ku quudisaa arachnids, duqsiyo iyo cayayaanka kale ee yaryar. Dhirta ayaa sidoo kale yar, laga bilaabo stem gaab ah ka dib markii ubax dhirta koraan by 4-7 caleemo. Blossoms ee ubaxyo yar yar, soo ururiyey burush.
Ma taqaanaa? Darwin waxay sameysay tijaabo badan oo dhirta oo cayayaanka ah. Wuxuu iyaga ku quudin jiray oo kaliya cayayaanka, laakiin sidoo kale ukunta ukunta, qaybo hilib ah. Natiijo ahaan, wuxuu go'aamiyey in geela la kiciyey, isagoo helaya cunto, miisaan la mid ah timaha bini-aadamka. Waxa ugu yaabka leh isaga ayaa ahaa Venus flytrap. Waxay leedahay heer aad u sarreeya oo ku xiraya dabinka, taas oo waqtiga dheefshiidka ee dhibanaha macnaheedu yahay caloosha. Si loo furo warshadda waxay qaadataa ugu yaraan hal usbuuc.
Caleenta dhaadheer ee dhamaadka ah waxay u qaybsan tahay labo xajmood oo wareegsan, kuwaas oo abuuraya dabin. Gudaha, lakabyada waa midab caseysan, laakiin caleemaha naftooda, iyadoo ku xiran kala duwan, waxay yeelan kartaa midab kala duwan, ma aha cagaaran. Dhinacyada geeska ah ee dabka, geedi socodka nacaybka ayaa kora iyo xabku waa mid soo jiidasho leh cayayaanka. Gubashada godka dusheeda ayaa kor u kaca. Sida ugu dhakhsaha badan ee dhibbanaha u xanaaqa, dabinka ayaa si deg deg ah u dilaya. Dareemadu waxay bilaabaan inay koraan oo ay dhuuntaan, xayiraan ugaadhsiga. Isla mar ahaantaana, juuska ayaa ka baxa dheefshiidka. 10 maalmood ka dib oo keliya qolofta qaniinka ah ayaa ka imanaysa. Inta lagu jiro mudada nolosheeda oo idil, caleen kasta oo ku jirta celcelis ahaan digests saddex cayayaan.
Dhirta Predator waa maanta nooca caan ah ee dhirta guriga. Run, inta badan ubaxlayaasha jilicsan waxaa loo yaqaanaa oo kaliya kaliya Venus flytrap. Xaqiiqdii, guriga, waxaad ku kori kartaa dhirta kale ee xiiso leh iyo dhirta. Qaar ka mid ah waxay u koraan si gaar ah biyaha, laakiin intooda badani waxay u baahan doonaan dheriga iyo carrada saboolka ah. Waa carrada saboolka ah ee nafaqo leh oo abuuray dabeecada sida geedo yaab leh oo ku quudiya cayayaanka iyo naasaha yar.
Sidee loo kariyaa maraq khudradda cagaaran ee tufaaxa? Cuntada caadiga ah iyo kala duwanaanta
Noocyada ugu caansan ee parsnip
Sawirro Dieffenbachia "Camilla" warshad cajiib ah oo halis ah - sida guriga loo daryeelo?
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu soo saaro toonta jiilaalka, ama marka la gooyo toonta jiilaalka
Waxaan ku dhisi karnaa xayndaabyo laga soocayo polycarbonate iyada oo gacmaheena leh: sawirrada, faa'iidooyinka, xulashada qaabka
Maanta waa suurtagal in la qiyaaso beerta beerta iyada oo aan lahayn currant cas. Tani waa mid ka mid ah caleemaha ugu caansan iyo ilaha fiitamiin oo fiitamiin ah, kuwaas oo loo diyaariyey jamacadaha ugu caansan, saxaradaha, waxsoosaarka, jelly iyo wax kaloo badan. Haddii aadan weli go'aan ka gaadhin nooca currant si ay u baxaan, ka dibna fiiro gaar ah u leh noocyada kala duwan ee "Vixne" - oo ku saabsan maqaalka dambe. Read More
Guryaha bogsiinaya saliida madow ee madow ee ragga
Cardinal ka mid ah canab - noocyo macaan iyo casiir leh Richelieu
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Rosyanka 2019